बजार सकारात्मक हुँदा कहाँ निर छ टेवा र प्रतिरोध ? - नेपालबहस
बजार सकारात्मक हुँदा कहाँ निर छ टेवा र प्रतिरोध ?
| १७:३३:१५ मा प्रकाशित
२३ भदाै, काठमाडाैं । सुरुवात राम्रो नभएपनि अन्तिम समयमा खरिदकर्ता आक्रामक हुँदा नेप्से परिसूचक ७ अंकले बढेको छ । आज १९० कम्पनीको शेयर कारोवार हुँदा १ अर्ब ७९ करोडको शेयर कारोवार भएको छ । नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ३५ अंकले वृद्धि हुँदै १४९५ दशमलव १५ को विन्दुमा बन्द भएको छ ।
प्राविधिक विश्लेषकका अनुसार यदि बजार १५०० भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार पुन सकारात्मक हुनसक्ने संकेत गर्नुका साथै बजारले पुन १५५० को क्षेत्रलाई प्रतिरोधको रुपमा सामना गर्न सक्ने देखिन्छ । तर यदि बजार १४७५ भन्दा तल स्थिर रहेमा बजार अझ केही सच्चिन सक्ने देखिन्छ र अर्को तत्कालिन टेवा १४३० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।
आज बजार १४९१ दशमलव ३३ को विन्दुमा खुलेकोमा बजारको न्यून विन्दु ११ बजेर ५० मिनेटमा १४७७ दशमलव २६ रहेको थियो । बजारले २ बजेर १३ मिनेटमा १५०० को उच्च विन्दु समातेको थियो । तर बजार १५०० को मनोवैज्ञानिक रेखा माथि बस्न असफल भएको छ ।
आज नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर सर्वाधिक कारोवार भएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको २७ करोड ५५ लाख बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
आज सर्वाधिक कमाउने ५ कम्पनीमा साल्ट ट्रेडिङ्ग, उन्नती सहकार्य लघुवित्त, एनआरएन लघुवित्त, जोशी हाईड्रोपावर र चिलिमे हाईड्रोपावर रहेका छन् ।
सर्वाधिक गुमाउनेमा एन.आर. एन, पन्चकन्या माई हाईड्रोपावर, आँखुखोला जलविधुत , घलेम्दी हाइड्रोपावर र युनिभर्सल पावर रहेका छन्।
✍ आज कारोबारको पहिलो समयमा शेयरबजार घटे पनि १४७७ मा टेवा प्राप्त गरि बजार बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको थियो । आजको बजारले “डोजी” मैनबत्तीको चित्र बनाएको छ । यसले आज बजारमा लगानीकर्ताहरु अन्योल अवस्थामा रहेको संकेत गर्दछ । आजको परिमाण भने प्रभावकारी देखिदैन् ।
✍ दैनिकी अवधिमा “आरएसआई” ६३ दशमलब ६२ को बिन्दुमा छ । यसको प्रवृत्तिले बजारमा पुन सकारात्मक हुन सक्ने जानकारी गरेको छ।
✍“एडीएक्स” ले हालसम्म बजारमा क्रेताको चाप रहेको संकेत गरे पनि जोड / बिजोड “डाइरेक्सनल इन्डेक्स”हरुले आजसम्म विक्रेताको चाप रहेको जानकारी गराएको छ।
✍“अन ब्यालेन्स भल्यूम” ले बजार सकारात्मक भई हाल्ने निश्चित जनाकारी गराएको देखिदैन् ।
यदि बजार १५०० भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार पुन सकारात्मक हुनसक्ने संकेत गर्नुका साथै बजारले पुन १५५० को क्षेत्रलाई प्रतिरोधको रुपमा सामना गर्नसक्ने देखिन्छ । तर यदि बजार १४७५ भन्दा तल स्थिर रहेमा बजार अझ केही सच्चिन सक्ने देखिन्छ र अर्को तत्कालिन टेवा १४३० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।
बजार प्रतिरोध क्षेत्रमा कायमै, प्राविधिक बिश्लेषणले के देखायो ? २ दिन पहिले
बजारलाई प्रतिरोध क्षेत्र तोड्न हम्मे हम्मे ! प्रतिरोध क्षेत्र तोड्न नसक्नुको कारण ? ७ दिन पहिले
आज नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले उकालो २ हप्ता पहिले
ओली प्रचण्डबीच बालुवाटारमा वार्ता शुरु ३३ मिनेट पहिले
माटोको ढिस्कोले पुरिएर स्याङ्जामा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते ! ५२ मिनेट पहिले